4 Mampiavaka ny fitiavana Platonika: fifandraisana misy karazany hafa - Fifandraisana
4 Mampiavaka ny fitiavana Platonika: fifandraisana misy karazany hafa
Na ny fianakaviana, na ny tombontsoa, ​​na ny harena, na ny zavatra hafa afa-tsy ny Fitiavana dia tsy afaka manazava izany fanilo izany izay tokony hitarika ny lehilahy iray rehefa mikasa hanana fiainana tsara kokoa izy. - Plato
Ny fitiavana ve no fahazavana mitarika amin'ny fiainana tsara kokoa? Betsaka ny olona mino fa izany no izy, ary izay kely azo atao raha tsy misy ny fitiavana ho mpanentana.
Ny fitiavana dia misy lafiny maro ary misy endrika maro: ray aman-dreny, filial, romantika ary platonic.
Fa inona no tiana holazaina rehefa miteny hoe 'namana platonika' na miresaka momba ny 'fitiavana platonika' isika?
Manao ahoana ny fifandraisana platonic maoderina sy mahasalama, ary ahoana no hitahizantsika izany?
Inona ny fitiavana platonika?
Ny fitiavana Platonika dia naka ny anarany avy amin'ny filozofa grika klasika malaza, Plato (428/427 na 424/423 - 348/347 BC).
Nanoratra momba ny fitiavana i Plato tao amin'ny sanganasany, ny Symposium, fifanakalozan-kevitra izay samy nanao kabary ho fanomezam-boninahitra an'i Eros andriamanitra ireo vahiny sy fiaraha-mikorana ary niady hevitra momba ny tena dikan'ny fitiavana.
Tamin'ny voalohany, ny fifanakalozan-kevitr'i Plato dia natokana ho an'ny firaisana ara-nofo amin'ny samy lahy na samy vavy, ny firaisana ara-nofo ary amin'ny fomba hafa, fa tamin'ny vanim-potoana Renaissance, ny fitiavana platonic dia tonga nanakona ireo fifandraisana tsy ara-nofo, heterosexual fantatsika ankehitriny.
Tamin'ny voalohany, ny fitiavana Platonika dia ny fitiavana izay tsy vetaveta, midika izany fa tsy nifantoka tamin'izany filan'ny na fanatanterahana ny filan'ny nofo. Fa kosa, fitiavana izay nanentana ny fikatsahana olona ambony, ary nampanakaiky kokoa an 'Andriamanitra. Io no nitondra ny tsara indrindra tamin'ny olona roa.
Mazava fa tsy tanteraka intsony izao ny raharaha. Ao amin'ny tontolontsika laika, ny fifandraisana platonic dia lasa kaody ho an'ny 'mpinamana fotsiny isika' (mihena ny tombony).
Amin'ny tranga maro, io olona io dia mety hiafara amin'ny maha olona iresahanao ny volana sy hiverenany, fa tsy mila liana am-pitiavana fotsiny, na manintona, amin'ny fomba ara-nofo.
Na izany aza, ny hevitra maoderina momba ny finamanana amin'ny platôlôjia dia tsy tsy misy dikany tanteraka amin'ny voalohany toy ny hevitra tany am-boalohany, ny fitiavana platôlônika, toy ny fitiavana tantaram-pitiavana, dia mety ho lalina sy mahery, ary mamorona finamanana tsara indrindra sy lava indrindra amin'ny fiainana.
Ary toy ny niandohany, ny fiandrasana fifandraisana platonic amin'izao fotoana izao dia mitovy: ny hitondranao ny olona toy ny fomba itondranao ny sakaizanao mitovy firazanana aminao.
Izy io dia toerana iray izay tsy anampin'ny fialonana ny lohany ratsy tarehy, ary ireo fandaharam-potoana miafina ary fitiavana tsy misy valiny tavela eo am-baravarana.
Io dia miorim-paka amin'ny tena fahamarinana marina, ary ny fahaizana ho tenanao manodidina an'io olona io tsy misy tahotra ny sivana, na fandaozana .
3 Toetra mampiavaka ny fitiavana Platonika
Fomba tsotra hamintinana azy dia: be namana tsara , fijanonana feno.
Na izany aza, tsy izany ny valiny tadiavin'ny olona indrindra amin'ny fotoana izay miova ny fifandraisana, sy ny firafitry ny herinaratra, ary tena mila fetrany.
Ireto toetra telo manaraka amin'ny fitiavana platonic ireto dia hanampy anao hahafantatra azy io, hitantana ny antenainao momba azy io, ary hitandrina izany fifandraisana izany ho sambatra sy ho salama ary hivoatra mandritra ny taona maro.
1. Ny fitiavana Platonika dia mamporisika ny fahamarinana tsy voasivana
Tsy dia ilaina loatra ny fitaka amin'ny fifandraisana platonic fotsiny.
Tsy toy ny amin'ny fifandraisana am-pitiavana, tsy misy tahotra ny handao anao ilay olona satria tsy niaraka taminao mihitsy izy ireo tamin'ny voalohany.
Tsy entana ianao, ka tsy avo ny tsatoka. Tsy misy fitandremana mitovy, na mila manara-maso ilay olona miaraka am-pientanam-po.
Afaka miady ianao, tsy miteny mandritra ny iray volana, avy eo mametaka zavatra ary hiverina amin'ny laoniny ny raharaha.
Ny fitiavana Platonika dia tsy mila mitsitsy ny fahatsapan'iza na iza. Tsy ilaina ny mitazona fasad.
Amin'ny lafiny sasany, ity fahamarinana feno habibiana ity dia tena lehibe tokoa, matetika dia fanamaivanana izany.
Azonao atao ny mahazo fomba fijery sy fomba fijery tsy ho azonao avy amin'ny olon-tianao.
Azonao atao ny mametraka ireo fanontaniana tsy mety hapetraka, ary tsy mila miahiahy be loatra momba ny toe-piainan'ny fiarahanareo.
Azonao atao ny miresaka an-karihary momba ny olana eo amin'ny fiarahanareo, ary mizara ny sakafonao manokana nefa tsy manahy ny amin'ny endrik'izy ireo ianao.
Ny fitiavana Platonika dia afaka milaza azy toy izany, ary afaka mandray ny vongan-draharaham-pitiavana tsy afaka satria tsy dia sarotra izany rehefa tsy variana manandrana hitazonana endrika ivelany ianao ary manaitra olona iray.
Tsy ataonao loha laharana izy ireo, amin'ny fomba tokony hataonao raha tafiditra am-pitiavana ianao.
Tsy midika izany fa tsy mihevitra ny fihetseham-pon'ny olon-kafa ivelan'ny an'ny tenanao na ny sakaizanao am-pitiavana ianao, fa misy ambaratonga hafa ny fandinihana rehefa manana lalao fiafarana mifankatia izahay.
Ny fifandraisana am-pitiavana dia tsy dia toy ny vatolampy, ary toy ny voninkazo ihany. Tokony hambolena tsara izy io, ary hikarakara azy io marefo sy tompon'andraikitra (toy ny voninkazo) ho faty tsy misy fiheverana sahaza azy.
Marina indrindra izany raha vantany vao manjavona ny fitiavana voalohany, lasa ny lolo, ary niara-nametraka lamina ahazoana aina ianao.
Io no manomboka ny tena asa. Ny fitiavana Platonika dia somary marefo kokoa ary afaka miatrika ireo fiakarana sy fidinana ireo.
Fomba 10 hanodinana ireo sakaiza tsy mahazatra ho namana tsara indrindra
Fanahy fanahy: inona no dikan'ny hoe manana fifandraisana toy izany
2. Ny fitiavana Platonika dia manaja ny fetra
Raha ny fifandraisana platonic tsotra izao dia mety misy lafiny voarara tsy ho azon'izy ireo (satria tsy mitazona fari-pitsipika mitovy amin'ireo mpitia antsika isika), tsy midika izany fa tsy misy fetra.
Ny fifandraisana platonika dia mitaky (indrindra amin'ny voalohany) fetra mahery . Ireo dia tsy resahina matetika na mifampiraharaha amin'ny fomba fanaovana dingana amin'ny fifankatiavana amam-pitiavana, fa kosa mihodina any aoriana.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantatrao ny halaviranao afaka manery ireo fetra ireo, ary rehefa mila mihemotra ianao.
Ohatra, rehefa miara-mandeha ianao - mizara efitrano iray ve ianao? Raha manao izany ianao, hiova ve izany raha sendra olona na olon-droa mifanerasera amina olon-tiana ianao?
Ny fitiavana Platonika dia mitaky fitokisana betsaka. Tena marina izany indrindra rehefa manao firaisana am-pitiavana ianao (na ny bestie platonic).
Mila mitandrina ianao amin'ny fananganana fifampitokisana mba hahazoana antoka fa takatry ny mpiara-miasa aminao ny toetran'ny fifandraisanao, ary tsy miteraka fandrahonana mety hitranga izany.
Raha manana BFF platonic ny iray hafao, ahoana no mety hilalaovan'izany aminao? Inona no raisina ho OK? Inona no tsy hanao?
Apetraho amin'ny tenanao ireto fanontaniana ireto dia henoy izany fahatsapana izany. Ny tsinainao matetika no mari-pamantarana tsara indrindra momba ny fiampitana ny tsipika sy izay azo ekena.
3. Ny fitiavana Platonika dia tsy misy antenaina
Na dia fanomezana sy raisina ho fiaraha-miasa aza ny finamanana, raha ny fitiavana tsy mitombina no resahina, tokony hitandrina ianao mba tsy hanantena na hitaky zavatra bebe kokoa an'io olona io noho ny finamanana mahazatra.
Anisan'ny mampiavaka ny platonic amin'ny fitiavana tantaram-pitiavana ny fanantenana. Manantena zavatra betsaka avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay izahay satria isaky ny olona mampiaraka dia mety manadihady azy ireo ianao amin'ny anjara asan'ny mpiara-miasa na ny vady.
Raha misy olona te handany ny fiainany miaraka aminao, dia mila mahay kalitao avo indrindra izy ary mahasosotra.
Tsy mamela ny fahadisoantsika isika amin'ny fifandraisana am-pitiavana, ary amin'ny lafiny iray, zavatra tsara ilaintsika hofidina izany rehefa mampiasa fotoana toy izany amin'ny mpiara-miasa mandritra ny fiainana iray manontolo.
Ny fitiavana Platonika dia tsy mihazona fenitra avo lenta ihany. Tsy mizara trano, ankizy, biby fiompy, kaonty amin'ny banky sns ianao - namana akaiky ianao, (ary mety) mandritra ny androm-piainana.
Afaka mody any amin'ny faran'ny alina ianao ary tsy manahy ny amin'izay ataon'io olona io, izay miaraka amin'izy ireo, na mandoa ny faktioran-jiro, mihinana ny sakafo hariva navelanao tao anaty vata fampangatsiahana, na nahantona ny lamba fanasan-damba mba ho maina.
Azonao atao ny manahy azy ireo raha nandia fotoan-tsarotra izy ireo, toy ny ataon'ny namana tsara voajanahary, fa ianao kosa tsy dia manambola amin'ny fandehanany andavanandro sy ny fifandraisana ivelany. Tsy tonga aloha izy ireo.
Raha manomboka mahatsikaritra ianao fa tonga aloha izy ireo, na diso fanantenana matetika ianao amin'ny fihetsik'izy ireo satria tsy mifanaraka amin'ny antenainao, dia mety mila mihemotra ianao manontany tena hoe: miditra ao ve ny fahatsapana fitiavana?
tsy manana fanantenana sy nofinofy aho
Miampita ny fetra ve? Fa maninona no takiko amin'ity olona ity ity? Mety manantena zavatra be loatra ianao.
4. Ny fitiavana platonika dia tsy misy fitiavan-tena
Ny fitiavana tantaram-pitiavana dia ampahany amin'ny fitiavan-tena. Mila izay tsara indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny.
Fanambadiana na hafa fifandraisana manolo-tena indraindray dia mitaky antsika hanao zavatra mety tsy hitondrantsika fihetsika hafa.
Ireo fihetsika ireo dia mety hiseho ho tsy misy fitiavan-tena eny ivelany satria mety hanao zavatra ho tombontsoan'ny vadinao ianao.
Fa jereo akaiky kokoa dia ho tsapanao fa tia tena izy ireo amin'ny heviny fa ataonao mba hitazomana ny firindrana sy hitazomana ny fifandraisana.
Ny fitohizan'ny fifandraisana sambatra dia hahasoa anao toa azy ireo ihany koa.
Ny fifandraisana no voalohany ary ny zavatra ilain'ny olona indraindray tsy maintsy sorona.
Ao amin'ny finamanana an-tsokosoko, ny antoko tsirairay dia maniry izay mety indrindra ho an'ny hafa, na inona na inona mety ho dikan'izany ho an'ny fifandraisana.
Angamba ianao manome ny olon-kafa toerana sy fotoana rehefa miditra fifandraisana vaovao izy ireo.
Mety te hanokana fotoana hiarahana amin'izy ireo ianao, nefa ekenao fa izay mety indrindra ho azy ireo dia mety tsy izay tadiavinao.
Ka avelanao handeha izy ireo, amin'ny fanantenana fa rehefa tafaorina ny fifandraisan'izy ireo vaovao, dia afaka mifamatotra indray ianareo.
Na angamba tsapanao fa ny fanatrehanao dia misy fiatraikany ratsy amin'ilay olona iray hafa.
Angamba ianao mihetsika toy ny sakantsakana mba hiankinan'izy ireo mba tsy hizahan'izy ireo ny olany.
Ohatra, mety efa nanampy azy ireo tamin'ny vola ianao indraindray, nefa fantatrao fa mbola tsy mitandrina izy ireo.
Ka hoy ianao hoe tsia amin'ny manaraka raha mangataka izy ireo ary mijoro tsara ianao na dia miteraka ady hevitra aza izany.
Amin'ny farany, fantatrao fa tombotsoan'izy ireo indrindra ny mianatra mandany teti-bola sy mandray andraikitra amin'ny volany.
Raha mitondra elanelana eo aminao vonjimaika izy io - na maharitra mihitsy aza - dia ataonao ihany satria tianao izay mety indrindra amin'izy ireo.
Ity fihetsika ity dia tsy misy fitiavan-tena amin'ny heviny fa tsy hahazo na inona na inona ianao amin'izany, fa ataonao amin'ny fanantenana fa hahazo tombony ny namanao platonic.
Fehiny: Tsy sarotra izany…
Ny fitiavana Platonika dia ho ampahany amin'ny toetran'ny olombelona hatrany - manome lanja isan-karazany ny olona rehetra mifanena aminy isika ary samy tia azy amin'ny fomba miavaka.
Ny fanekena sy ny fanajana ireo fahasamihafana ireo dia hitondra antsika hanakaiky kokoa ny fitiavan'ny platonika voalohany an'i Platon - iray izay mampiakatra antsika ary mampiditra antsika mandritra ny fiainana.
mankaleo amin'ny fiainana mila fanovana
Na dia mety heniky ny fahasarotana aza ny fitiavana, ny firaiketam-po roa tonta no toerana iray ahafahanao milaza am-pitiavana hoe: tsy sarotra izany.
Ny fifandraisana Platonika dia manome sombin-javatra lehibe amin'ny fitiavantsika sy itiavantsika antsika mandritra ny fiainana.
Izy ireo dia afaka manome finamanana mahafa-po sy maharitra, manolotra fomba fijery mamelombelona antsika, ary fivoahana iray tena nilaina mba hamoahana ny etona, ary avelao izy rehetra hiaraka.
Ireo no olona tia antsika mihena ny entana, ireo namana 'rock' izay manome aingam-panahy ny tsara indrindra ao amintsika, ary milaza amintsika izay tokony ho rentsika rehefa nivily lalana isika.
Tandrovy ny fifandraisanareo, mifanaja ny fetran'ny tsirairay, avelao ny fanantenana, ary manaova izay mahasoa azy ireo.
Ny fahatsiarovana ireo zavatra telo lehibe ireo dia handeha lavitra amin'ny fifandraisana salama sy sambatra.
miantso ahy amin'ny telefaona izy
ahoana no ilazana raha tiako ny lehilahy
ny fomba hiatrehana ny fahadisoam-panantenana eo amin'ny tenanao
Romana manjaka tsy mahomby fitsapana wellness
manao sonia fa tiany ianao nefa manafina azy
ny fomba fanombohana taratasim-pitiavana